गण्डकी विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २७ फागुन २०७५)
कम्पनीले २०६४ मङ्सिर ५ गतेदेखि कारोबार शुरू गरेको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २६ करोड ५२ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५२ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २० करोड ४५ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ७९ लाख ३८ हजार खराब कर्जा उठाएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ७५ करोड छ भने रिजर्भ कोषमा रू. ८८ करोड ३० लाख छुट्याएको छ । २०७४/७५ को मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १४ दशमलव २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । कम्पनीले पुस १० गतेसम्म हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएका शेयरधनीको हकमा १४ दशमलव २० प्रतिशत नगद लाभांश बैंक खातामा पठाएको छ । हाल कम्पनीले ७७ ओटा शाखा कार्यालयबाट बैंकिङ सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।
2019-03-11 - 102 view(s) - abhiyan